ဝင်ငွေပိုလိုချင်သလား? ၎င်းကိုအချိန်တိုအတွင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဝင်ငွေပိုလိုချင်သလား? Short Term Bond Portfolio ထဲမှာရှာပါ
စက်တင်ဘာလ 4, 2019 စက်တင်ဘာလ 11, 2019 အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, အသားပေးသတင်းများ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ
ဝင်ငွေပိုလိုချင်ပါသလား သင်၏အဖြေသည်ဟုတ်ကဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်သတင်းကောင်းရှိသည်။ Durig ရဲ့ FX2 အစုစု အပြည့်အဝစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော ၀ င်ငွေရွေးချယ်မှုများမြင့်မားစွာထုတ်လုပ်စဉ်တွင်၎င်း၏သက်တူရွယ်တူစံနှုန်းများ၏သမိုင်းကြောင်းထက်သာလွန်မှုသမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်မှတ်တမ်းမှတ်ရာများရှိသည်။
(အထက် - FX2 Benchmark Performance၊ 8-27-19)
တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် (YTD) ၁၀.၉၈% ပြန်လာသည်
3 နှစ်အတွက်ပြန်ပို့ခြင်း% X ကိုကြည့်ရှုခြင်း
5 နှစ်အတွက်ပြန်ပို့ခြင်း% X ကိုကြည့်ရှုခြင်း
နှစ်စဉ်ပြန်လည်စတင်ခြင်း (တစ်သက်တာပြန်လာခြင်း) ၏ ၈.၄၆% ၏နှစ်စဉ်ပြန်လာသည်
Durig ၏ပုံသေ ၀ င်ငွေ ၂ (FX2) အစုစုသည်အချိန်နှင့်အမျှစွမ်းဆောင်ရည်တွင်ပုံသေ ၀ င်ငွေရရှိသူများကို ဦး ဆောင်နေပြီး၎င်း၏နှစ်စဉ်သက်တမ်းသည် ၈.၄၆% ဖြင့်အနီးဆုံးစံနှုန်းကို ကျော်လွန်၍ ၃% ကျော်သည်။ FX2 သည်၎င်း၏သက်တူရွယ်တူများထက် ၅ နှစ်နှင့် ၃ နှစ်တာကာလအတွင်း ၃% နှင့် ၄.၅% အသီးသီးကျဆင်းခဲ့သည်။
ဤအချက်သည်ပြောင်းလဲနေသည့်အတိုးနှုန်းပတ်ဝန်းကျင်၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်အထောက်အကူပြုသည့်အစုစုအတွင်းရှိပျမ်းမျှသက်တမ်းတို (၄ နှစ်မပြည့်မီ) နှင့်အစုရှယ်ယာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အစုစပ်၏အနှုတ်လက္ခဏာ beta -4 ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည် စျေးကွက်တစ်ခုလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပုံသေ ၀ င်ငွေနှင့် ၀.၄၀ အနိမ့် beta ကိုရရှိသည်။ ဤရွေ့ကားမက်ထရစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ FX2 အစုစု နှောင်ကြိုးစျေးကွက်မှအနှုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုနှင့်ခြုံငုံစျေးကွက်တစ်ခုအလွန်အားနည်းဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
အတိုးနှုန်းကိုလျှော့ချသည့်လမ်းကြောင်းသည်နှစ် ၃၀ အတွင်းအမေရိကန်ဘဏ္USာရေး ၀ င်ငွေသည် ၂% အောက်လျော့နည်းသွားသည်နှင့်အညီဆက်လက်ဖြစ်နေပုံရသည် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသမိုင်းဇယား) ။
(ရင်းမြစ် - https://www.macrotrends.net)
ဤသည်မေးခွန်းအသနားခံ; အဘယ်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၂% အောက်အမြတ်ပြန်ရရန်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ရှေ့ကိုမျှော်လင့်ကြမည်နည်း။ ဤနှုန်းသည်လက်ရှိငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ၁.၈ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေမရှိဘဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအန္တရာယ် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ ၀ ယ်ယူနိုင်စွမ်းမှာသိသိသာသာကျဆင်းနေသည် အတိုးနှုန်းအန္တရာယ်အတိုးနှုန်းများရုတ်တရက်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးကျဆင်းသွားနိုင်သည့်အလားအလာဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးနှင့်အခြားရေရှည်ကြွေးမြီဆိုင်ရာစာချုပ်များကိုပုံမှန်အားဖြင့်သိမ်းဆည်းထားသောကြောင့်အချိန်တိုတိုကာလအတွင်းသတ်မှတ်ထားသည့် ၀ င်ငွေရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုများ၊ Durig ရဲ့ FX2 အစုစု.
နှိုင်းယှဉ်မှု၌, Durig ၏ပုံသေဝင်ငွေ2(FX2) မြင့်မားသောဝင်ငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဝင်ငွေအစုစု ပျှမ်းမျှသက်တမ်း ၄ နှစ်မပြည့်သေးသော်လည်းပျမ်းမျှအားဖြင့် ၈% ကျော်ခန့်ရှိသည်။ အစုရှယ်ယာဝင်ငွေမြင့်မားခြင်းနှင့်ဆွဲဆောင်မှုပြန်များဆက်လက်ထုတ်လုပ်ရန်ဆက်လက်တည်နေရာဒါကြောင့်ဤသည်အချိန်တိုတောင်းတဲ့ကာလ၌ပိုမိုအစုစုဝင်ငွေနှင့်ညီမျှ, အသစ်သောကိစ္စရပ်များတွင်ငွေချေးစာချုပ်ကျောင်းအုပ်ကြီးရင့်ကျက်နှင့်အတူညီမျှ။
FX2 ၏စုစုပေါင်းအမြတ်ငွေ၏အခြားဘက်ခြမ်းသည်ငွေချေးစာချုပ်များတွင်သူတို့ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့်အဓိကငွေပမာဏမှလာသည်။ ၎င်းသည်မကြာခဏလျှော့စျေးဖြင့်ပေးရသောကြောင့်အဓိကစွန့်စားမှုကိုလည်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည် (ဘယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အဓိကငွေပမာဏကြောင့်စျေးကွက်တပ်ဖွဲ့များကြောင့်အတက်အကျနိုင်ပါတယ်) ။ ငွေချေးစာချုပ်စာချုပ်သည်ပြောင်းလဲနေသော်ငြားလည်းငွေချေးစာချုပ်ကူပွန်ကိုအတိုးပေးနေသရွေ့အတိုး ၀ င်ငွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တိုးပွားနေဆဲဖြစ်သည်။
Durig ၏ပုံသေဝင်ငွေ2(FX2) ကာလတိုငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်ဆိုင်ရာအသစ်ပြောင်းခြင်းများအတွက်ယခုနောက်ဆုံးစာရင်းသွင်းပါ။
Durig ၏ပုံသေ ၀ င်ငွေ ၂ (FX2) အစုစုသည်အချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းရွယ်တူချင်းများထက်သာလွန်မြင့်မားစွာဆက်လက်ရှိနေပြီးဤလမ်းကြောင်းကိုဆက်လက်တည်ရှိရန်အဆင်သင့်ရှိနေသည်။ US Treasury Notes သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားအထွက်နှုန်းနည်းပြီးလျော့နည်းစေသည်နှင့်အတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်နှစ် ၃၀ စောင့်ဆိုင်းရသောကာလမလိုအပ်ပါ။
၀ င်ငွေရရှိနိုင်မှုနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအထွက်နှုန်းအတွက်ပုံသေ ၀ င်ငွေပိုမိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် Fixed Income2(FX2) ၀ င်ငွေအစုစုကိုစီမံသည် အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်သည်။ အတိုးနှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချရန်အစုစု၏သက်တမ်းတိုတောင်းသောရင့်ကျက်မှုသည်လက်ရှိစျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုကိုလျော့ပါးစေရန်အထောက်အကူပြုသည်။ ထို့အပြင်သီးခြားစီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်များကသင်၏ဝင်ငွေလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင့်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလွန်အောင်မြင်သော FX2 Portfolios များကို TD Ameritrade Institutional တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပေးများထံသီးသန့်စီမံခန့်ခွဲထားသောအကောင့်များမှလည်းရရှိနိုင်သည်။ ဤအရာသည်သင့်အတွက်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားမေးမြန်းပါ
ခွငဖြေ။ ။ သုတေသနပြုချိန်မှ စ၍ အထွက်နှုန်းနှင့်စျေးနှုန်းညွှန်းကိန်းအားလုံးကိုပြသထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစီရင်ခံစာများသည်မည်သည့်လုံခြုံရေးကိုမဆိုဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပွဲစား / ရောင်းဝယ်သူမဟုတ်ပါ။ အစီရင်ခံစာများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များထံသို့ဖြန့်ဝေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။ ဒီသုံးသပ်ချက်တွင် Durig Capital မှတင်ပြသောအထွက်နှုန်းမြင့်မားသောနည်းဗျူဟာများသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားလုံးအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ၎င်းသည် Durig Capital မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များမဟုတ်သကဲ့သို့လုံခြုံရေး ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချရန်အတွက်တိကျသောထောက်ခံချက်လည်းမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်သင့်တော်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်မချခင်မှတ်ပုံတင်ထားသောပညာရှင်ထံမှတိကျသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်တောင်းခံသင့်သည်။
အခြေခံစံနှုန်းစွမ်းဆောင်ရည် နှောင်ကြိုးစျေးကွက် ငွေချေးစာချုပ်များ အများပိုင်သတင်း Durig Capital ကို Durig Fixed ဝင်ငွေ Fixed ဝင်ငွေခွန် Fixed ဝင်ငွေ2FX2 FX2 အစုစု FX2 မဟာဗျူဟာ မြင့်မားသည် ဝငျငှေ Informa စိတ်ဝင်စားမှု အနိမ့်အတိုးနှုန်း မနက်ခင်း performance အစုစု အစုစုကိုမဟာဗျူဟာ သုတေသန ပြန်လည်သုံးသပ် မြင့်တက်နှုန်းထားများ ကာလတို SMA စတော့ရှယ်ယာ မဟာဗျူဟာ TD Ameritrade ထိပ်တန်းအဆိုတော် ထိပ်တန်းအဆင့် ဘဏ္.ာရေး အသားပေး
ပျင်းရိပါ - ပျင်းရိခြင်းသည်မသေပါ၊ ၎င်းသည်လူ့သဘာဝဖြစ်သည်